Akwukwo uzo (503612-47-3) hplc =98% | AASraw R & D Reagents
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Ntụ ntụ
SKU: 503612-47-3. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike sitere na gram ka usoro nchịkọta nke apixaban ntụ (503612-47-3), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Akara ntụ ntụ video
Akwa ntụ ọka isi agwa
aha: Akwa ntụ ọka
Molekụla Formula: C25H25N5O4
Ọbara arọ: 459.50
Nchekwa Nche: 20 Celsius C na 25 Celsius C
agba: White ka icha mmirimmiri-edo edo ntụ ntụ
Akwukwo ntụ ntụ ntụ ntụ
Akwukwo ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
Ọchịchị na ndị nchikota abụọ nke CYP3A4 na P-gp
Ọ bụrụ na ịchọrọ> 2.5 PO BID, belata mkpatị site na 50%
Ọ bụrụ na ị na-ewere 2.5 mg BID, zere coadministration na ndị na-eme ihe ike abụọ
Ọhụụ na-enweghị ihe ọhụụ na-adịghị na ya
Gbanyụọ dose na 2.5 mg MA NDỊ ọrịa nwere ihe ọ bụla 2 nke àgwà ndị a:
Afọ ≥80 afọ
Ibu ≤60 n'arọ
Ngwurugwu creatinine ≥1.5 mg / dL
Mbelata na Mmetụta nke ọnyá / System Embolism na Nonvalvular Atrial Fibrillation, 5 mg (Ndị okenye) ugboro abụọ kwa ụbọchị; Ihe ọ bụla 2 nke ndị a: afọ ≥80 yr, iko ≤60, ọbara creatinine ≥1.5 mg / dL- 2.5 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị; Ugboro ugboro na ndị na-eme ihe ike dị na CYP3A4 na P-gp-2.5 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị; ọ bụrụ na ndidi enweela 2.5 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị, zere iji nkwenye.
Mmetụta Mberede, HD- 5 mg (okenye) ugboro abụọ kwa ụbọchị; HD na ma ọ bụ afọ ≥80 yr ma ọ bụ ibu ≤60 kg- 2.5 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị.
Mgbochi nke Mkpụrụ Ahụhụ Miri Ahụ Thrombosis Na-esote Ọkpụkpụ ma ọ bụ Ntugharị Ntugharị Ntugharị, 2.5 mg (Ndị okenye) ugboro abụọ kwa ụbọchị, malitere 12-24 mgbe ọ na-arụ ọrụ (mgbe e nwetara hemostasis) gara n'ihu maka 35 ụbọchị mgbe ọ gbanwere hip ma ọ bụ 12 ụbọchị mgbe ebido ikpere.
Ọgwụgwọ DVT ma ọ bụ PE, 10 mg (Ndị okenye) ugboro abụọ kwa ụbọchị maka ụbọchị 7, mgbe ahụ 5 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị.
Mbelata bụ Ọdịdị nke nlọghachi nke DVT ma ọ bụ PE, 2.5 mg (okenye) ugboro abụọ kwa ụbọchị ≥6 maka ọgwụgwọ DVT ma ọ bụ PE.
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
Ihe kachasị na-ebute ya na-agba ọbara na nkwụsị nke Spinal, gwa dọkịta gị ma ọ bụ nweta enyemaka ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ịrịba ama ndị ọzọ ma ọ bụ ihe mgbaàmà ndị nwere ike ịdaba na mmetụta dị njọ:
Ihe ịrịba ama nke mmeghachi omume nfụkasị, dị ka ọkụ ọkụ; ndokwa; nhazi; acha uhie uhie, fụrụ akpụ, kpọnwụọ, ma ọ bụ na-acha akpụkpọ anụ ma ọ bụ na-enweghị ọkụ; ntụgharị; ike na obi ma ọ bụ akpịrị; nsogbu iku ume, ilo ihe, ma obu okwu; ihe na-adịghị ahụkebe; ma ọ bụ ọzịza nke ọnụ, ihu, egbugbere ọnụ, ire, ma ọ bụ akpịrị.
Ihe ịrịba ama nke ọbara ọgbụgba dị ka ịmịpụ ọbara ma ọ bụ tụfuo dị ka kọfị kọfị; ụda ọbara; ọbara na mmamịrị; nwa, uhie, ma ọ bụ akwa oche; ọbara ọgbụgba site na goms; ọbara ọgbụgba nke na-adịghị mma; ọnyá na-enweghị ihe kpatara ya ma ọ bụ na-ebu ibu; ma ọ bụ ọbara ọgbụgba nke dị njọ ma ọ bụ na ị pụghị ịkwụsị.
Ịgba aghara ma ọ bụ ịgafe.
Ihe mgbu na nkwonkwo.
Ihe mgbu ma ọ bụ nrụgide.
Ike gwụrụ ike ma ọ bụ na-adịghị ike.
Nwee obi mgbagwoju anya.
Akpa ntụ ntụ nwere ike ime ka ọbara ọgbụgba dịkwuo njọ, nke nwere ike bụrụ ihe dị njọ na nke nwere ike ịnwụ. Iji otu ọgwụ na-eme ihe na-emetụta ọkpụkpụ ahụ nwere ike imekwuwanye ihe ize ndụ a. Nke a na-agụnye ọgwụ ọjọọ dịka ndị na-emepụta ọgwụ ndị ọzọ, heparin, aspirin, ọgwụ mgbochi ọgwụ, ndị na-emechi ihe omimi nke serotonin, ndị serotonin norepinephrine rehibitors, na ọgwụ ndị na-adịghị egbochi ọgwụ ọjọọ (NSAIDs).
Otu nchegbu maka iji apixaban ntụ na ndị ọzọ na-emepụta ọgwụ ọhụrụ bụ enweghị njikọ nke ọma maka mgbanwe nke ọrụ ha (enweghị ngwọta dị). Nke a bụ ihe dị mkpa na-adịghị emetụta agha na-akpata mgbe nsogbu ọgbụgba na-apụta, ma ọ bụ mgbe ndị na-aṅụ ọgwụ chọrọ ịwa ahụ mberede.
Mgbe a na-eji usoro ọgwụgwọ ọrịa ma ọ bụ nkwụsị na-agwọ ọrịa, ndị ọrịa na-emeso ndị na-egbochi thrombotic maka mgbochi nsogbu nsogbu thromboembolic nwere ihe ize ndụ maka ịmepụta hematoma, nke nwere ike ime ka ọkpụkpụ ahụ na-adịru ogologo oge. Enwere ike ịmalite ihe ize ndụ nke a site na iji catheters na-arụ ọrụ ma ọ bụ intrathecal mgbe ọ na-arụ ọrụ ịwa ahụ ma ọ bụ site na iji otu ọgwụ na-eme ihe na-emetụta ọkpụkpụ.
Akuku ntụ ntụ bụ ihe na-eme ka obụ anya na onye na-emechi ihe nke ihe kpatara Xa bụ nke a na - eji mee ka ọ ghara ịdaba na ọnyá na - eme ka ọnyá na ọrịa strok na - arịa ọrịa na - emepụta ihe na - . A na-ejikọta ntụ ntụ ntụpọ na ọnụọgụ dị ala nke ọbara ọbara aminotransferase n'oge ọgwụgwọ na oge ndị na-adịghị ahụkebe nke ọrịa ahụ.
A na-egosiputa ntụ ntụ maka ihe ndị a:
Iji belata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa strok ma mee ka ndị ọrịa na-atụgharị uche na-enweghị ihe ọ bụla.
Mkpụrụ obi thrombosis (DVT) dị omimi. DVTs nwere ike ibute ngwongwo (PE) na ikpere ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ịwa ahụ.
Ọgwụgwọ ma DVT ma PE.
Iji belata ihe ize ndụ nke DVT na PE mgbe ọ na-amalite usoro ọgwụgwọ.
Akwa ụrọ apixaban
Akpa ntụ ntụ bụ ihe na-acha ọcha na-acha odo odo. Na pH (physiological pH) (1.2-6.8), ntụ ntụ na-adịghị ọkụ ọkụ; ya na-agabiga na ngwugwu pH na - 0.04 mg / ml.
Mbadamba ELIQUIS dị maka nchịkwa ọnụ na ikike nke 2.5 mg na 5 mg nke Apixaban ntụ ntụ na ihe ndị na-adịghị edozi: lactose anhydrous, microcrystalline cellulose, sodium croscarmellose, sodium lauryl sulfate, na magnesium stearate. Ihe mkpuchi ihe nkiri ahụ nwere lactose monohydrate, hypromellose, titanium dioxide, triacetin, na oxide oxide (2.5 mg tablets) ma ọ bụ ígwè uhie uhie (5 mg mg).
Akwa ntụ ọka Marketing
Otu esi azụta Apixaban ntụ ntụ si AASraw
Ntụziaka ntụziaka nke ụkọ ntụpọ:
Apixaban (Eliquis): njiri, mmekọrịta, mmetụta ndị ọzọ, ịdọ aka ná ntị
1 nyochaa maka Akwa ntụ ọka
Akpa ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi